Budata GIF Viewer maka Windows
Budata GIF Viewer
Budata GIF Viewer,
IHE: Akụrụngwa GIF Viewer ka ahagharịrị aha InViewer
Ihe omume GIF Viewer so na mmemme efu ị nwere ike iji mepee faịlụ GIF na kọmpụta gị nụzọ kachasị ọsọ na nke kachasị mfe, yana ọ nwere ike bụrụ ezigbo ngwọta maka ndị nwere nsogbu, ọkachasị ebe ọ bụ na sistemụ Windows anaghị abịa na mmemme. mepee GIF. Agbanyeghị na njirimara a batara na Windows 8, ndị ọrụ Windows XP na Windows 7 ga-eji GIF Viewer mepee faịlụ GIF nenweghị nsogbu ọ bụla.
Usoro ihe omume, nke nwere ihe dị mfe iji interface, na-enye kpamkpam nefu na ike ga-eji na-emeghe GIF faịlụ nakwa dị ka tọghata ha na ndị ọzọ na-ewu ewu image format. Ọ dịkwa ike na-ese na animated GIF faịlụ na-agbanwe animation, otú i nwere ike dezie animated GIF na-enweghị mkpa ọ bụla ọzọ ngwá ọrụ.
Mmemme ahụ, nke na-eji akụrụngwa sistemu arụ ọrụ nke ọma, nwekwara ike ịgba ọsọ ọsọ na kọmpụta ochie. Ọ na-egbochi gị ịchọ ihe nchọgharị weebụ gị ka ọ mepee GIF mgbe niile, si otú a na-enye ohere ịrụ ọrụ nke ọma.
GIF Viewer Ụdịdị
Mmepụta: Stefan Wobbe
DWG FastView bụ mmemme emere maka gị iji lelee ọrụ AutoCAD na kọmputa dị na Windows. DWG FastView,...
FastPictureViewer bụ obere ihe nkiri na - ese onyinyo nke nwere ike ịga nokpuru sistemụ arụmọrụ...
Honeyview bụ sọftụwia dị mfe ma baa uru iji hazie eserese kachasị amasị gị. Ekele maka imepụta ọkụ...
Nihi StudioLine Photo Basic, mmemme nefu nke dị mfe iji, ị gaghị efu netiti foto gị. Site nusoro...
Ihe omume 7GIF bụ ngwa eji akwụ ụgwọ na mfe iji rụọ ọrụ maka igwu egwu gif, nke a ma ama na...
SpotlightPicView bụ obere mmemme ị nwere ike ịlele ma dezie onyonyo Chakwasa ihie, nke bụ mkpokọta...
Nnukwu eserese ngosi bụ mmemme bara uru ị nwere ike iji lee foto gị wee mee mgbanwe ụfọdụ. ...
IHE: Akụrụngwa GIF Viewer ka ahagharịrị aha InViewer Ihe omume GIF Viewer so na mmemme efu ị nwere...
Maverick Photo Viewer bụ mmemme dị mfe iji lelee na hazie foto na kọmputa gị. Ewezuga ngwa ngwa na...